विद्यालयमा फास्ट एड बक्स, कतै नर्स पनि | Aaja ko Shiksha
अब विद्यालयमा ‘फास्ट एड बक्स’ अर्थात् उपचार बक्स राख्नैपर्ने भएको छ । सरकारले विद्यालयमा प्राथमिक उपचार ‘फास्ट एड बक्स’ हुनैपर्ने नियम जारी गरेको हो । अकस्मात् घट्ने घटनालाई रोकथाम गर्न राखिएका विभिन्न औषधीको सामान भएको सानो बक्सलाई फास्ट एड बक्स भनिन्छ । जुन बिरामी भएको बेलामा वा चोटपटक लागेको समयमा तत्काललै उपयोग गर्ने सकिने एउटा सजिलो उपचार पद्धति पनि हो । यस्तो बक्समा विद्यालयमा प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु जस्तै, सिटामोल, बेन्डेज, कैंची, जीवनजल, भिटामिनलगायतका सामग्रीहरु राखिन्छन् । यसबाट विद्यालयमा भैपरी आएका घटनालाई रोकथाम गर्न मद्दत मिल्छ ।
विद्यालयमा विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा फास्ट एड बक्स उपलब्ध भएका छन् भने केही विद्यालयले आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । विद्यालयमा प्राथमिक उपचार परामर्श कक्ष नै भनेर छुट्टाइएको हुन्छ । जहाँ बिरामी बालबालिकालाई राखेर उपचार गर्न सजिलो हुने गर्छ । प्राथमिक उपचारका लागि विद्यालयमा ‘एक विद्यालय–एक नर्स’ भन्ने अभियानसमेत शुरु भएको छ । कतिपय विद्यालयमा नर्स नै राखेर स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा दिइँदै आएको भेटिन्छ ।
भक्तपुर बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्न ‘हेल्थ क्लब’ नै खडा गरेको छ । यस विद्यालयमा फास्ट एड बक्स पहिलेदेखि नै राखिएको छ । स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जसँग परामर्श लिएर मात्र औषधी विद्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थी खेल्ने, चक–चक तथा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा चोट लाग्ने भएकाले यस्ता सामान्य चोटपटकको उपचार त्यहीँ गर्ने र जटिल प्रकारको चोट लागेमा नजिकै रहेको अस्पतालमा तुरुन्तै पु¥याउने व्यवस्था विद्यालयले गर्दै आएको छ । विद्यालयको हाताभित्र रहेसम्म बिरामी भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने गरिएको छ ।
विद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पढाउने शिक्षक राखिएको छ । ४ सय ५० जना विद्यार्थी रहेको यस स्कूलमा हप्तामा दुईदेखि तीनजना विद्यार्थी बिरामी हुने गर्छन् । ‘खुला चौर छैन, यसले गर्दा विद्यार्थी खेल्दा ढुङ्गामा परेर चोट लाग्छ,’ प्रधानाध्यापक गोपालविक्रम थापाले भन्नुभयो । विद्यालयमा नै फास्ट एड बक्स उपलब्ध भएका कारण कुनै समस्या नरहेको समेत उहाँको भनाइ छ । कदाचित तत्कालै घटना घटेमा विद्यार्थीलाई तालिमप्राप्त शिक्षकले कस्तो प्रकारको उपचार गर्नुपर्ने हो हेरर निक्र्यौल गर्ने गर्छन् । अवस्था जटिल भएमा क्लिनिक पु¥याउने गरेको प्रअ थापाले बताउनुभयो ।
काठमाडौंस्थित डिल्लीबजारमा रहेको पद्यकन्या माध्यमिक विद्यालयमा फास्ट एड बक्स त छँदैछ, नर्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरेको करिव दुई महिना पुगेको छ । विद्यार्थीलाई घाऊ, चोटपटक लागिहालेमा वा टाउको र पेट दुख्ने, ज्वरो आउने तथा अन्य कुनै बिरामी भएमा नर्सले जाँचेर जटिल अवस्था देखिए तुरुन्तै अस्पताल लैजाने सल्लाह दिने गर्छन् । डिल्लीबजार पद्यकन्या माविमा नर्सलाई समाजकल्याण परिषद्अन्तर्गत करार पदमा नियुक्ति गरिँदै आएको प्रअ रीता तिवारीले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षाका लागि विद्यालयमा छुट्टै कक्षाकोठाको व्यवस्था गरिएको छ । नर्सका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरु विद्यालयलाई समाजकल्याण परिषद्ले नै उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
‘प्राइलट प्रोजेक्टबाट व्यवस्था गर्न लागेको नर्सका लागि हाम्रो विद्यालय पनि छनोटमा परेको हो,’ प्रअ तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्ने र आवश्यक परामर्श गराउन, चोटपटक लाग्दा के गर्ने ? भैपरी आएका घटनालाई रोकथाम कसरी गर्ने ? यसका फाइदा के छन् ? विद्यालयमा मात्रै होकि अन्य समयमा पनि कतिको आवश्यक रहेको छ, विद्यार्थीलाई यसका बारेमा पूर्ण जानकारी गराउन फस्ट एड बक्स प्रत्यक्ष प्रयोग गराएर सिकाउन नर्स नै राखिएको छ ।’
विद्यालयले घाउचोट लाग्दा मात्रै नभएर विद्यार्थीलाई उपचारका सामग्री प्रत्यक्ष नै परिचालन गर्न लगाउँदै शिक्षा दिन पनि थालिएको छ । विद्यार्थीले हेरेरभन्दा पनि गरेर सिक्छन् भन्ने बुझाइलाई पूर्णता दिनु नै पर्छ । बालबालिका कोही स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमै अब्बल हुन्छन् । विद्यार्थीबाट जनचेतना जगाउन, सेवाको भाव उब्जाउन विद्यालयमा विभिन्न सरसफाइका कार्यक्रमसमेत भइरहेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा निर्देशक पदम विष्टले देशभरिका २ सय २२ वटा विद्यालयलाई ‘नमूना’ बनाउन छनोट गरिसकेको बताउनुभयो । नमूना विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन एउटा पाटो भएकाले यो हुनैपर्ने र अन्य विषयसमेतलाई यसभित्र समेटेको उहाँ विष्टले सुनाउनुभयो । विष्टले बालबालिकका लागि चाहिने सम्पूर्ण ह्विलचियर, बेन्डेज, पट्टि, जीवनजल, भिटामिन, परामर्श कक्ष, एकजना स्वास्थ्य परामर्शदातालगायतको विद्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
भक्तपुरस्थित बालकोटमा रहेको बालविनायक आधारभूत विद्यालयमा कक्षा १–५ सम्म पढाइ हुन्छ । यस विद्यालयमा ६० देखि ६५ जना विद्यार्थी छन् । फास्ट एड बक्स प्रयोग गर्नका लागि छुट्टै ‘बालक्लब’ नै बनाइएको छ । विद्यालयमा घटेका घटना आफैंले निक्र्यौल गरेर जटिल भएमा नजिकै रहेको क्लिनिकमा लैजान व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा सिटामोल, जीवनजल, भिटामिन, बेन्डेज, कैंची, कपासलगायतका समाग्री राखिएका छन् ।
शिक्षक विनिता पुरी भन्नुहुन्छ, ‘फास्ट एड बक्सबाट विद्यार्थीलाई उपचारका निम्ति मात्रै नभएर पढाउनसमेत सजिलो भएको छ ।’ उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी चारदिने तालिम लिनुभएको छ । शिक्षक पुरीले भन्नुभयो, ‘तालिमबाट आएको पैसाले औषधीका सामान लिएर आएकी छु । यस विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार सामान नभएकाले तालिमबाट प्राप्त रकम औषधीमै खर्च गर्ने गरेका छौं ।’ सोही स्कूलकी शिक्षक पार्वता ढकाल विद्यालयमा फास्ट एड बक्स हुनु जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले विद्यार्थी खेल्दा, केही अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दा लाग्ने चोटपटक सजिलै उपचार गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले फास्ट एड साँच्चै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । विद्यालयमा निःशुल्क औषधी उपचार गराउनुका साथै स्वास्थ्य शिविर पनि गर्ने गरिएको छ ।
यी विद्यार्थी, यिनलाई कसले गर्ने उपचार...?
सोही विद्यालयका विद्यार्थी कृष्ण राउतले भने ठूलै रोगसँग लडिरहनुपरेको छ । उहाँलाई हर्मोन तथा मुटुसम्बन्धी रोगले पीडा दिइरहेको छ । ‘यहाँ विद्यालयमा प्राथमिक उपचार त गर्ने गरिन्छ, सानातिना घाउ निको हुन्छ तर मेरो जस्तो रोगको उपचार यहाँ सम्भव छैन,’ बालक कृष्ण राउतले गम्भीर मुद्रामा भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक अवस्था अत्यधिक न्यून भएकाले आफ्नो उपचार नभएको गुनासो गर्नुभयो । स्कूलकी शिक्षक गीता भट्टराईले विद्यालयले गरेकोे सहयोगले मात्रै उपचार गर्न सम्भव हुन नसकेको बताउनुुभयो । उहाँको आशा छ, ‘अन्य निकायबाट सहयोग भएमा आर्थिक रकम जुटाएर उपचार गर्न सजिलो हुनेथ्यो ।’